Isbedelka Siyaasada Ethiopia iyo tacadiyo Khatar Badan oo Aay gaysteen Liyuu Booliiska Degaanka Soomaalida | Biyoguurenews.com
Home Wararka Isbedelka Siyaasada Ethiopia iyo tacadiyo Khatar Badan oo Aay gaysteen Liyuu Booliiska...
Isbedelka Siyaasada Ethiopia iyo tacadiyo Khatar Badan oo Aay gaysteen Liyuu Booliiska Degaanka Soomaalida
Arrimahaas ayaa dabo socday isbadal siyaasadeed oo wayn oo dhawaan ka dhacay dalka Itoobiya ka dib markii uu xilka iska casilay ra’iisulwasaarihii hore Hailemariam Desalegn, isaga oo arrintaas ku macneeyay in uu waddada u xaarayo in isbaddallo dhab ah ay ka dhacaan dalka Itoobiya, isla markaasna la dhagaysto dalabka shacabka.
Haddaba waxaan halkan ku soo koobaynaa dhacdooyinkii naadirka ahaa ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyay.
Nidaamka dib u curashada ayaa ah in shaqaalaha dawladda loo wareejiyo deegaan aan ahayn midka uu ka soo jeedo.
Dadka arrintan sida guud u dhaliishanna waxay nidaamkaas ku duraan in shaqaalaha laga baddalo guryahoodii iyo qoysaskooda isla markaasna aan dhaqaale kale lagu kabin oo la siiyo isla mushahaarkoodii hore.
Mudaaharaadyadii ayaa qaboobay waxayse si lama filaan ah uga qarxeen magaalada Wajaale.
Xukuumadda Dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay markaas inay billawday in ay soo abaabusho isu soo baxyo ay ku muujinayso taageeradeeda, waxaana deegaanka oo dhan ka dhacay dibadbaxyo waawayn.Wasiirro, xildhibaanno iyo masuuliyiin kale oo fadhigoodu ahaa magaalada Jigjiga ayaana ka soo muuqday dibadbaxyada lagu muujinayay cududda taageerada dawladda oo deegaannada fogfog ka dhacay.
Masuuliyiinta Dawladda Federaalka ah iyo kuwa Deegaanka midkoodna durba kama hadlin arrintaas.
Waa run Jamaal oo ah masuulkii hay’adda u qaabilsanaa Deegaanka Soomaalida ayaa Jigjiga lagu jirdilay, yaa jirdilay, maxaa loo jirdilay, sidayse arrintaasi u dhacday waa arrin qayb ka ah baaritaanka aan wadno ayuu yiri”.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee caalamiga ah ayaa marar badan laamaha ammaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida ku dhaliilay in ay tacadiyo gaystaan.
Saldhig booliis oo ku yaala magaalada Qabridahar ayaa laga dhex helay gabadh mayd ah oo la sheegay in halkaas ay ku sugnayd wakhti aad u kooban, arrintaasina waxay dhacday 11 bishan May.
Gabadhan oo lagu magacaabo Taysiir Cumar Maxamed Cilmi Salal wali ma aysan guursanin, waxayna u shaqaynaysay dowladda hoose ee magaalada Qabridahare, gaar ahaan xaafadda shanaad.
Baraha bulshada ayaa aad loogu faafiyay qoraalo iyo haddalo looga soo horjeeda falka dhacay, waxaana arrintan ka dhashay dareen caro leh iyo mudaaharaad.
Demisew Betni oo hay’adda xuquuqda aadanaha ee Itoobiya u qaabilsan warfaafinta ayaa sheegay in dhacdadan iyo kuwo kalaba la soo gaarsiiyay hay’adda ayna baaritaanno ku hayso.
Waxaa laga yabaa in haddii arrimahaasi ay sii xoogeystaan ay cadaadis ku keenaan madaxweynaha iyo maamulkiisa. Balse inuu dhaco isbadel siyaasadeed oo la taaban karo waxay u baahan tahay labo arrimood midkood:
Labadaas arrimood midkoodna hadda ma muuqdaan, sidaas daraadeedna waxay u muuqataa in ay xilka sii hayn doonto xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo looga bartay in uu la jaan qaado isbadalladii sanadihii dambe ka dhacayay dalka Itoobiya.
Previous articleDrs Adna Adan oo Qiso layaableh ka Sheekaysay,
Next articleDAAWO, Tahriibayaal Dhib kasoo Gaadhay Liibiya iyo Dareenkooda Markii Aay Yimaadeen hargaysa